बालबालिकामा बढ्दैछ कोभिडकाे जटिलता, कान्तिमा मात्रै ३० जना ‘एमआइएस—सी’का कारण भर्ना – Health Post Nepal
कान्ति बाल अस्पतालमा दैनिक एक बालबालिका ‘मेल्टिस्टिम इन्फ्लामेटोरी सिन्ड्रोम’ ( एमआइएस—सी) ले भर्ना हुने गरेका छन्।
अस्पतालका निर्देशक डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलले पछिल्लो समयमा कोरोनाका कारण बालबालिकामा गम्भीर समस्या थपिएको बताए।
हालसम्म कान्तिमा मात्र ३० भन्दा बढी बालबालिका एमआइएस—सी कारण भर्ना भएका छन्।
‘असोज महिनामा फाट्फुट एमआइएस—सीको समस्या देखिने गरेको पाइएको थियो,’ डा. पौडेलले भने,’ तर, आजभोलि दैनिक एकभन्दा बढी बालबालिका भर्ना भएका छन्।’
अस्पतालका अनुसार कान्तिमा एमआइएस—सीका कारण एक १३ बर्षको बालकको मृत्यु भएको छ।
एमआइएस—सी बालबालिकामा कोभिडपछि देखिने एक प्रकारको जटिल अवस्था हो।
२ देखि १३ बर्षका बालबालिकामा एमआइएस—सी देखिएको डा. पौडेलले बताए।
एमआइएस—सी भएका बालबालिकामा लामो समयसम्म ज्वरो आउने, आँखाको साथै जिब्रो रातो हुने, झाडापखाला हुने, टाउको दुख्ने तथा छालामा बिरामी आउने हुन्छ।
एमआइएस—सी भएका प्राय जसो बालबालिकामा पिसिआर नेगेटिभ हुने, तर एन्टिबडी पोजेटिभ देखिएको पाइएको डा. पौडेलले बताए।
के हो एमआइएस, कसरी परिचाहन गर्ने ?
एमआइएस—सी का लक्षण कावासाकी जस्तै देखिन सक्छ। तर, विभिन्न परीक्षणको आधारमा एमआइएस—सी हो कि होइन भनेर छुट्याउन सकिने डा. डिल्ली भुर्तेलले बताए।
एमआइएसका शरीरका विभिन्न अंगहरु मुटु, फोक्सो, मिर्गौला मस्तिष्क, छाला, आँखा र ग्यास्ट्रोस्टाइनल अगंहरु सुन्निने गर्दछ।
‘२१ वर्षभन्दा मुनिकालाई कावासाकीजस्तै लक्षण देखिन्छन र गम्भीर भएर अस्पताल भर्ना गनुपर्ने अवस्था र तिनीहरूमा दुई वा दुईभन्दा बढी अगंमा असर भएको पाइएको छ,’ डा. भुर्तेल भन्छन्,‘ चार हप्ता अगाडि कोरोना संक्रमण भएको प्रमाणित वा शंका लागेमा त्यसलाई एमआइसी शंका गर्नुपर्दछ।’
डा. भुर्तेलको अनुसार एमआइसी यकिन गर्ने पिसिआर वा एन्टिबडी परीक्षण पोजिटिभ आएको हुनुपर्ने छ।
‘विशेषगरी बालबालिकामा तीन दिनसम्म ज्वरो नभएको अवस्थामा कावासाकी शंका गरिँदैन। तर, मल्टिसिस्टम इन्फ्लेमेटोरी सिन्ड्रोम हुँदा ज्वरो २४ घन्टासम्म भए पनि शंका गर्नुपर्ने हुन्छ,’ डा. भुर्तेल भन्छन्।
‘चार हप्ताभन्दा अगाडि कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि पिसिआर तथा एन्टिबडी परीक्षणबाट गर्दछौं,’ डा. भुर्तेल भन्छन्, ‘तर, यदि पिसिआर र एन्टिबडी पोजिटिभ नभए पनि कोभिडका लक्षण देखिएका थिए भने पनि त्यसलाई आधार मान्न सकिन्छ।’
Tags: कान्ति बाल अस्पताल, मल्टिसिस्टम इन्फ्लेमेटोरी सिन्ड्रोम